Bushaaro Bushaaro | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Waxa loogu bushaaraynayaa cidkasta oo la socon jirtay qoraaladaydii iyo maqaaladii aan ku qori jiray baraha bulshada in aan dhamaystiray buugii aydun muddaba sugayseen soo bixitaankiisa ee uu cinwaankiisu ahaa maxaad ka taqaan dariiqada Xaaxi?. Buuggaas oo si qotadheer uga hadlaaya dariiqada xaaxi oo ka mid ah dariiqooyinka ugu facaweyn Soomaaliland iyo deegaanka gobolka Daadmadheedh. Waxaanu ka kooban yahay buugu 168 page.
Waxaana lagu soo Bandhigi doonaa magaalada Hargaysa dabayaaqada bisha May Insha Allaah .
Waxaynu ka war haynaa in aanay jirin wax qoraallo taariikheed ah oo laga qoray dariiqada Xaaxi oo laga heli karo dalka. Iyadoo ay sabab u noqon karto in aanay dadka soomaalidu hore u lahayn af qoran oo ay ku qortaan taariikhda iyo dhacdooyinkii xilligaas ay la kulmaayeen. Haddaba aniga oo ka duulaaya fikirkaas, waxaan go’aansaday in aan qoro buuggan si loo helo sawir guud oo muujinaya raad-raaca taariikheed ee soo jireenka ah ee laga dheehan karo taariikhda dariiqada Xaaxi laga soo bilaabo illaa qarnigii 17aad.
Cutubyada Buuggani ka kooban yahay waa:-
⦁ Taariikhda darriiqada Xaaxi
⦁ Taariikhda ururka Sunbul iyo aas-aaskii iskuulka hoyga dariiqada Xaaxi
⦁ Dhul beereedka Xaaxi ku wareegsan
Qoraallada buuggan waxa loogu talagalay inay ka faa`iidaysan karaan dhammaan cid kasta oo doonaysa inay wax ka ogaato taariikhda dariiqada Xaaxi, ama dadka jecel inay bartaan Xaaxi iyo deegaan ahaan waxa ay tahay.Qoruhu waxa uu soo dhaweynayaa wixii fikrad iyo talo soo jeedin ah ee ku saabsan qoraallada buuggani ka kooban yahay.
Cidkasta oo buug qorta ama curisa waxbaa ku dhaliya inay qoraan buugga, haddaba aniga waxa igu dhaliyey inaan curiyo ama qoro buuggan MAXAAD KA TAQAAN DARIIQADA XAAXI? Sababahan soo socda awgood:-
⦁ Markaan arkay baahida loo qabo barashada taariikhda dariiqada Xaaxi oo ah mid ka mid ah dariiqooyinka Somaliland ugu facaweyn uguna qadiimisan jirtayna illaa qarnigii 17aad,dariiqadaas oo raadayn iyo saamayn balaadhanba ku lahaan jirtay deegaanka .
⦁ Markaan eegay halka ay umaddeenu wax qorista ka taagan tahay iyo dhibaatooyinka ay inoo geeysatay qoraal la’aantu, haday tahay raad-raac taariikheed iyo tukalaba.
⦁ Markaan arkay taariikhda qadiimiga ah ee ku duugan gobolka Daadmadheed iyo khayraadka ceegaaga ee kala duwan iyo baahida ay ummaddu u qabto in ay khayraadkaa wax ka ogaadaan.
⦁ Marka aan arkay doorka uu gobolku ku leeyahay beeraha iyo tacab la’aanta ka taagan .
⦁ Waxa kale oo ka mid ah ujeedooyinka igu dhaliyey in aan qoro buuggan oo aan diyaariyo si jiilalka iga danbeeyaa ay u helaan una raad-raacaan.
⦁ Waxa kale oo igu dhaliyey buuggan in aan qalinka u qaato qodobo si gaar ah ii saameeyey kuwaas oo ay ka mid yihiin , in aan nafteyda u sheego in ay qori karto buugg. Isla markaana ay ku dadaasho sidii ay u dhammaystiri lahayd buugga.
Qalinkii: Maxamed Muuse Cilmi Qoraa iyo Suxufi madax banaan Bariise_77@hotmail.com/www.facebook.com/maxamedbariise Tel:0634149171 Hargaysa,Soomaaliland